Ishe Nemadhimoni — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Aaron J Robinson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:59 ndiri • pindura
Kuva Detroit Youth Pastor, uye mumaguta muvhangeri, makanga muna pamusoro wangu 3 Artist mazita kubva debut yako. Asi uchiona izvi zvinomutsa bhaa angu kuremekedza iwe kure mhiri emhizha. Zvirokwazvo, uri mushumiri Gospel!
Ramba Rokuparidza & Kusvika!
Sandi Staley • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:00 ndiri • pindura
Hanzvadzi konama, ndinogona chete ndinokuudzai ndinokudai muna Jehovha? Ini chete kunzwa pamusoro pako manheru ano nokutevera kubatana kuti rwiyo yako Beautiful Life, re nokuda Ryan Bomberger pamusoro LifeNews.com, uye ndiri chaizvo kuona Jehovha achishandisa iwe! Dai He vakuropafadzei (uye mhuri yako itsva!) zvikuru sezvo ukaramba kuzoshumira vaya Akauya kuzotsvaka nokuponesa.
Catherine Kuykendall • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:00 ndiri • pindura
kuremekedza, rambai muchiita zvauri kuita!
Rikki Lewis • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:00 ndiri • pindura
Ndinochida, dzirambe kuuya.
dave.scik • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:01 ndiri • pindura
Amma guru kuchera mu ZVIKURU
jtm • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:01 ndiri • pindura
simba. Rumbidzai Ishe.